« Fa Izaho milaza ny marina aminareo; mahatsara anareo ny fialàko; fa raha tsy hiala Aho, dia tsy ho avy atỳ aminareo ny Mpananatra; fa raha handeha Aho, dia hirahiko ho aty aminareo Izy. » Jao 16 :7
Fanahin’ny fahamarinana” no iantsoana ilay Mpananatra. Mamaritra sy mihazona ny fahamarinana no asany. Ao am-po no itoerany voalohany indrindra, amin’ny maha-Fanahin’ny Fahamarinana Azy, ary amin’ny alalan’izany no mahatonga Azy ho Ilay Mpananatra. Misy fampaherezana sy fiadanana ao amin’ny fahamarinana, fa tsy ahitana fiadanana tena izy sy fampaherezana kosa ao anatin’ny fitaka. Amin’ny alalan’ny tsangan-kevitra diso sy ny fampianaran-diso voatolotry ny razana no ahazoan’i Satana fahefana eo amin’ny saina. Volavolainy tsy ho araka ny tokony ho izy ny toetra amin’ny alalan’ny fitarihany ny olona hanaraka filamatra diso. Miteny ao an-tsaina ny Fanahy Masina amin’ny alalan’ny Soratra Masina, ary mamaritra ny fahamarinana ao am-po. Ary amin’izany no anehoany ny fahadisoana, sy androahany izany tsy ho ao amin’ny fanahy. Amin’ny alalan’ny Fanahin’ny fahamarinana, izay miasa amin’ny alalan’ny Tenin’Andriamanitra, no hisarihan’i Kristy ny olom-boafidiny ho eo Aminy.
Nitady ny hanentana ny fon’ny mpianany amin’ny fifaliana sy ny fanantenana izay nanentana ny fony i Jesôsy rehefa namelabelatra taminy ny asan’ny Fanahy Masina. Faly Izy noho ny amin’ireo fanampiana mitafotafo nomeny ny fiangonany. Ny Fanahy Masina no fanomezana ambony indrindra amin’ny fanomezana rehetra, izay azony nangatahina tamin’ny Rainy ho fanandratana ny olony. Nomena ny Fanahy Masina mba hanao asa famelombelomana, ary raha toa ka tsy eo izany, dia tsy ho nisy vidiny ny sorona nataon’i Kristy. Nihanatanjaka nandritra ny taonjato maro ny herin’ny ratsy, ary mahatalanjona ny faneken’ny olona ity fambaboana ataon’i Satana ity. Amin’ny alalan’ny asan’ilay Persôna fahatelo amin’Andriamanitra Telo Izay Iray irery ihany, izay ho avy amin-kery tsy mbola niova, fa ho avy amin’ny fahafenoan’ny hery maha- Andriamanitra Azy, no hahafahana manohitra sy mandresy ny fahotana. Ny Fanahy Masina no mampahomby ny zavatra izay notontosain’ny Mpanavotra an’izao tontolo izao. Amin’ny alalan’ny Fanahy no ahafahana manadio ny fo. Amin’ny alalan’ny Fanahy no mahatonga ny mpino ho mpiray fomba amin’ny lanitra. Nomen’i Kristy ny Fanahiny mba ho hery avy any an-danitra hoenti-mandresy ireo fironana ho amin’ny faharatsiana izay nolovana sy novolena, ary mba haharitra eo amin’ny fiangonany ny toetrany”. – RH, 19 Nôv. 1908..